Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေ အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်(GTC) ကျောင်းဆရာမများစီနှင်းလိုက်ပါလာသော ကားကို ဘင်္ဂလီကုလားများမှ တိုက်ခိုက်
စစ်တွေ အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်(GTC) ကျောင်းဆရာမများစီနှင်းလိုက်ပါလာသော ကားကို ဘင်္ဂလီကုလားများမှ တိုက်ခိုက်
ဟင် အင်'s စစ်တွေ
အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်(GTC) ကျောင်းဆရာမများစီနှင်းလိုက်ပါလာသော ကားကို ဘင်္ဂလီကုလားများမှ တိုက်ခိုက်
ယနေ့ ၁၇.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့ နေလည် ၃ နာရီပတ်ဝန်လောက်တွင် စစ်တွေမြို့ ရေချမ်းပြင် ကျေးရွာနားတွင် ရှိသော အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်(GTC)မှ ကျောင်းပြန်လာသော ဆရာမများ စီးနှင်းလိုက်ပါလာသော သုံးဘိးဆိုင်ကယ်ကို လမ်းပေါ်ရှိ ရွာကြီး၊ ရွာငယ် ဘင်္ဂလီကျေးရွာများမှ ဘင်္ဂလီကုလား ၃၀၀ လောက်က တားဆီပြီး ဒုတ်၊ ဓားများဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာမများ ဆိုင်ကယ်ရှေ့တွင် ပါ သော သုံးဘီဆိုင်ကယ်မှ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်းသူက ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး နောက်မှ လိုက်ပါလာသော ဆရာမများမှ ဓားများ၊ ဒုတ်များကို ရှောင်ရှားပြိး အသက်လု ထွက်ပြေးလာရပါသည်။
ယင်းအချိန်တွင် အခင်းဖြစ်ပွါးရာနေရာတွင်လည်း လုံထိန်၊ ရဲ ၊ စစ်သား၊ အစောင့်များမရှိဘဲ အခြေအနေမှ အလွန် စိုးရိမ်ရပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွါးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ဆရာမ တယေက်က - အခုဆိုရင် ကျွန်မတို့ လုံခြုံမှု လုံးဝမရှိတောပါ။ ဒီရွာတွေကို ဒီနေရာက မရွေ့ပေးရင် ကျွန်မတို့ ကျောင်းကို ဆက်မသွားနိုင်တော့ပါ။ အလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အလုပ်ပြုတ်ခံတော့မှာပါ- လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:01
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေ အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်(GTC) ကျောင်းဆရာမများစီနှင်းလိုက်ပါလာသော ကားကို ဘင်္ဂလီကုလားများမှ တိုက်ခိုက် . All Rights Reserved